5 Eyona Christmas Kwiimarike Kwi-Germany | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Eyona Christmas Kwiimarike Kwi-Germany
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 25/01/2021)
Ngaba ukholelwa ukuba phantse elo xesha lonyaka kwakhona? Lixesha kakhulu elihle kulo nyaka! Ngokwenene ukungena umoya kunye Best Christmas Markets e Germany! Ukususela ekupheleni Novemba de Eva Christmas, izikwere idolophu lonke eJamani ukuba ndii neemarike Christmas. Njengoko omnye izithethe ezininzi ezigcine Deutschland (Germany in German), kwizixeko ezikhulu kunye needolophu ezincinane ngokufanayo ukubhiyozela ixesha kokufika. Ngoko ke Uthatha imagi evuthayo gluhwein kwaye silungiselele chestnuts iwotshi Mfud umlilo evuliwe kwezi akakwazi miss holiday-hot spots.
1. Frankfurt Romerberg And St. Pauls Isikwere Christmas Kwimakethi
Oku koko Best Christmas Markets ngamaphupha Germany zenziwa. Ukubaleka ephithizelayo yase eFrankfurt ngaphakathi isixeko Old Town, leyo iba iKrismesi weDreamland ngexesha lekhrismesi. Romerberg kwaye St. Pauls square wenziwa nesiqingatha ngamaplanga izindlu sithi ndijonge. Bazele kwizindlu ngomthi wayifulela izibane, zobuhlalu, nezidanga. Yiba Qiniseka ukuba miss ethandwa ezintle kwe ezintsimbi, a Eva Christmas isiko apho iintsimbi ibandla Old Town Khalisa ngokuvisisana lonke kwisithili ekukhuliseni amava ikhonsathi esimangalisayo.
A Affairs kuno eFrankfurt, kodwa kanye nje omlingo! Le ilali encinane khotsho ngaphakathi iintaba ngaphaya komda Belgium. ngokwenene Monschau eza uyaphila ngexesha leKrismes kunye Best Christmas Markets e Germany.
Le dolophu imihombiso iKrismesi kubonakalise ukuba zithandwa kangangokuba abantu balapha kwavula ngonyaka ngeenxa House of Christmas. ke, ukuba ufuna musa njenge Christmas, ke le nto ngokuqinisekileyo hayi indawo yokuhlala! Ngosuku uhambo ukusuka Cologne okanye Dusseldorf, yiya ulondoloze town illuminate e twilight ngexesha nibbling kwi zabo jonga Monschauer Dutchen spongecake kwaye sipping mulled iwayini phambi kwenu intloko emva kwisixeko. Ekubeni izitrato zawo agranyagranya, snow topped isiqingatha imithi embalwa izindlu, kwemicimbi umlambo akunto emfutshane yokuchitha.
Le yenye Europe kakhulu imizi amahle ephakathi. Oku amahle ukuze ujonge njenge iseti movie. Oku kuyinyaniso ingakumbi ngexesha leKrisimesi kwaye kubonakala ibamba ezinye Best Christmas Markets e Germany.
Ngal kwesango kunye zokhuselo iinqaba lidlulisela aura of a sentsomi. Njengoko singena ngenye bamasango ezindala, uza ngoko nangoko bazive ekhuselekileyo ngaphakathi ixesha honored iindonga le ndawo romanticcomment. Rothenburg olunegazi lundoyisile phezu elidlulileyo 1,000 iminyaka kwaye uyaqhubeka siphoswe mabophe yayo kwi iindwendwe ngamazwe.
Ukususela ngenkulungwane ye-15, a market Christmas omangalisayo bekusoloko inkalo ixesha leKrismesi zehlobo. Oku kwimakethi unako sijonga emva kwi 500 unyaka tradition, kwaye ukusukela ngeli xesha sele ngobulumko yatshintsha kancinane kakhulu ukusuka imvelaphi yayo yomlando. iziganeko ezininzi yenkcubeko iyabanjwa kunye kule marike. Eyona nto iyimbalasane kule imarike, kunjalo, ingaba inkangeleko ye Rothenburg Abakhweli, osinike eli gama layo. I-zembali lemveli ye riders iza kuthi ukususela dim kwaye distant elidlulileyo. Oobawo babekholelwa ukuba abathunywa ukusuka kwenye indawo, lowo wahamba esibhakabhakeni kunye imiphefumlo yabafileyo sebusika. Kodwa ke umfanekiso sinalento basentsomini iye yatshintsha ukutyhubela iinkulungwane. Kanti omnye osetyenziswayo bathuthumele esoyika phambi kulo mzobo siba, namhlanje, abatsha nabadala bakhangele phambili nokubuya kwakhe. Abamahashe lirhamncwa abe isithunywa friendly.
4. Christmas Market Munich Marienplatz
Ukumkani eMunich Christmas Markets enye Best Christmas Markets e Germany. Le Christkindlmarkt inokufumaneka Marienplatz, main square eMunich, kunye nezitali zeentlobo entle baphalaza waya ezikufuphi izitrato zokuthenga njengokuba.
Ngenxa yokuba indawo yayo esembindini eMunich Old Town, le yeyona imakethi kakhulu touristy nezixineneyo, kodwa kubalulekile ethandwa kakhulu kuba isizathu: imfikele emva emkhombeni obugcisa bezandla ngesandla zemveli, delightful snacks ukuba abe bought kwaye zonke kakhulu romanticcomment ilaphu elipeyintiweyo ye-Neues Rathaus. Qiniseka ukuba abaleke, waya entendelezweni Rathaus ukubona nezitali ngakumbi eposini Christkindl, apho unokufumana i Christkindl isitampu ekhethekileyo postcards zenu / iincwadi.
PS: Ukuze ufumane i imbono extra omlingo, qiniseka ukuba khwela phezulu St Peters Ibandla Kwencopho emva kokutshona kwelanga kakhulu!
5. WaseLondon Christkindlesmarkt
WaseLondon Christkindlesmarkt, okanye Christmas Market Nuremberg, ingaba xa Germanys uninzi famous Christmas kwimakethi. I-Christmas kwimakethi kwi Nurembergs Engundoqo Kwimakethi Isikwere kusenokuba traced emva amaxwebhu kuqala mentioning kwayo kunyaka 1628, kodwa Nurembergers bakholelwa yaba emva nangaphezulu.
Ukugcina tradition kubalulekile, kwaye uninzi nezitali bathengisa izinto zabo athengise izinto zonke zenziwa kwingingqi. Nkqu ezibayeni ngomthi ngokwabo ezenziwe nespruce kwingingqi intsusa!
Uya kufumana 180 kwizindlu yeplanga ngokuthengisa yonke into ukusuka Men ungasitheni emveli ukuba bahombise izindlu Nurembergers ngexesha leKrismesi ukuya Nuremberger soqobo ukuba igama kuphela ngolo hlobo ukuba ziveliswa ngaphakathi kwemida yesixeko futhi ube yile 23 grams.
Ukulungele ukuva magic kweKrismesi ngokundwendwela i Best Christmas Markets e Germany? Emva koko intloko phezu ku Gcina A Isitimela kwaye ncwadi itikiti imizuzu!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Eyona Christmas Kwiimarike Kwi-Germany” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-germany%2F%3Flang%3Dxh – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)